Semalt - कसरी अनुप्रयोगहरू र फाइलहरू कन्फिगर गर्न .NET फ्रेमवर्क को उपयोग गर्न को लागी
.NET फ्रेमवर्क एक प्रोग्रामिंग मोडल हो जुन एप्लिकेसनहरू निर्माण गर्न निर्बाध, दृश्य प्रयोगकर्ता अनुभव, र सुरक्षित संचार मोडल हो। भर्खरको मार्केटिंग उद्योगमा, तपाईलाई व्यापारको निर्णय र अपरेशन्स बनाउन उपयोगी र मूल्यवान डाटाको पहुँच आवश्यक पर्दछ। .NET रूपरेखा भित्र आउँछ जहाँ यो छ।
नेटबाट उपयोगी जानकारी पुन: प्राप्त गर्न तपाईलाई विस्तृत वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरू चाहिन्छ। .NET फ्रेमवर्क उच्च स्तरको सफ्टवेयर र उपकरणहरू निर्माण गर्न डिजाइन गरिएको हो जुन तपाईंको वेब स्क्र्यापिंग आवश्यकताहरू र विनिर्देशहरू पूरा गर्दछ। हालसालै, .NET फ्रेमवर्कको संस्करणहरू प्रयोग भइरहेको संस्करण and र are. are हो। यस फ्रेमवर्कको पहिलेको रिलीजमा संस्करण २.०, 3.0.० र 3.5.। समावेश छ।
कसरी .NET फ्रेमवर्कले काम गर्दछ
.NET फ्रेमवर्क, कन्फिगरेसन फाइलहरू मार्फत, वेब स्क्र्यापर्सलाई वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरू चलाउने तरिकामा नियन्त्रण गर्ने अवसर दिन्छ। यस अवस्थाहरूमा, कन्फिगरेसन फाइलहरूले स्क्र्याप गरिएको सामग्री समावेश गर्दछ जस्तै एक्सएमएल फाइलहरू जुन सजिलै अन्य प्रयोगयोग्य ढाँचामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। .NET फ्रेमवर्कको साथ तपाईले कन्फिगरेसन फाइलहरूको सिन्ट्याक्स र तीन प्रकारको कन्फिगरेसन फाइलहरू सिक्नुहुनेछ जुन सुरक्षा, अनुप्रयोग, र मेशिन समावेश गर्दछ।
.NET फ्रेमवर्क बनाम ASP.NET
ASP.NET एक वेब फ्रेमवर्क हो जुन .NET फ्रेमवर्कको साथ गतिशील वेब अनुप्रयोगहरू र सेवाहरू निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस खुला स्रोत ढाँचा कास्केडि Style शैली पाना (CSS), जाभास्क्रिप्ट, र HTML5 मा आधारित उच्च गुणवत्ता साइटहरू सिर्जना गर्दछ।
एउटा कन्फिगरेसन फाइलमा तत्व वेब सेटि ofहरू समावेश हुन्छ जुन अनुप्रयोगलाई निर्दिष्ट हुन्छ। जहाँसम्म, अनुप्रयोग कन्फिगरेसन फाइलको स्थान र नाम तपाईंको आवेदन होस्टमा निर्भर गर्दछ। .NET फ्रेमवर्कको साथ, वेब डेटा निकाल्ने उपकरणहरू कन्फिगर गर्दा भर्खरै सजिलो भयो।
ASP.NET कसरी चलाउने
तपाईं सेटिंग्स को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब ASP.NET इन्टरनेट जानकारी सेवा (IIS) को पछिल्लो संस्करणहरूमा एकीकृत मोडमा चलिरहेको छ। नोट गर्नुहोस् कि एलिमेन्ट वेब र समर्थित सुविधाहरूले मात्र काम गर्दछ यदि तपाईंको स्थापित ASP.NET अनुप्रयोग IIS 7.0 वा भर्खरै जारी संस्करणहरूमा होस्ट गरिएको छ।
प्रक्रियामा ASP.NET का लागि सफलतापूर्वक लामबद्ध गर्न सकिने अनुरोधहरूको अधिकतम संख्याहरू अनुरोध लाम सीमा विशेषता द्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। जब यो फ्रेमवर्कको दुई भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू एकल अनुप्रयोग पूलमा चल्दछन्, कुनै पनि अनुप्रयोग पूलमा गरिएको अनुरोधहरूको कुल संख्या एलिमेन्ट वेब सेटिंग्सको अधीनमा हुन्छ।
ASP.NET कन्फिगरेसन फाइल प्रयोग गरेर कन्फिगर गर्दै
एप्लिकेसन पूल वेब सेटिंग्स एक विशेष .NET फ्रेमवर्क संस्करणमा चलिरहेको सबै पूलहरूमा लागू हुन्छ, जहाँ एलिमेन्ट वेब सेटिंग्स कन्फिगरेसन फाइलमा समावेश छन्। नोट गर्नुहोस् कि तपाई Windows 7. मा IIS .0.० चलाएर सबै अनुप्रयोग पोखरीहरूको लागि छुट्टै कन्फिगरेसन फाइल कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई प्रत्येक अनुप्रयोग पूल तत्वद्वारा कार्यान्वयन गरिएको थ्रेडको सामान्य प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
ASP.NET फ्रेमवर्क मात्र उपयोगी परिणाम प्रस्तुत गर्दछ यदि तलका सर्तहरूमा चलेमा:
जब तपाईं एकीकृत मोडमा IIS 7.0 चलाउनुहुन्छ क्लासिक मोडले अनुप्रयोगलाई तपाईंको आदेश बेवास्ता गर्न बनाउँदछ।
ASP.NET ढाँचा IIS 7.0 (वा पछिल्लो संस्करण) अनुप्रयोग पूलमा होस्ट गर्नु पर्छ।
तपाईको अनुप्रयोगले .NET फ्रेमवर्क 3.5. Ser सीरियल पेरिफेरल ईन्टरफेस (SPI) वा अन्य भर्खरको रिलिजहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
वेब जानकारीको तत्वहरू
अनुप्रयोग पोखरी तत्वले तपाईंलाई ASP.NET कन्फिगरेसन फाइलमा सबै IIS अनुप्रयोग पूलहरूको लागि अन्तिम कन्फिगरेसन सेटिंग्स निर्दिष्ट गर्न मद्दत गर्दछ। एलिमेन्ट वेब सेटिंग्स को निम्नलिखित घटकहरु को हुनु पर्छ:
खाली हुन सक्छ
अभिभावक तत्वले प्रत्येक कन्फिगरेसन फाइलको प्राथमिक घटक निर्दिष्ट गर्न काम गर्दछ जुन साझा भाषा रन-टाइम र .NET फ्रेमवर्क अनुप्रयोगहरू द्वारा प्रयोग हुन्छ। दुबै बच्चा र अभिभावक तत्वको एलिमेन्ट संयोजनले तपाईंलाई कुशलतापूर्वक कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ कसरी ASP.NET फ्रेमवर्कले बहु-थ्रेडहरू प्रबन्ध गर्दछ र अधिक कसरी यसले सबै अनुरोधहरूलाई लामबद्ध गर्दछ जब .NET फ्रेमवर्क IIS अनुप्रयोग पूलमा होस्ट गरिएको छ।